ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ ၁၁ ဘီလီယံ ဘယ်လဲ ? ~ SAI SENG SERK
Home » MYOPINION » ပြည်သူ့ပိုက်ဆံ ၁၁ ဘီလီယံ ဘယ်လဲ ?
မြန်မာပြည်သူတွေ၏ ဥစ္စာရင်းပိုင် ၁၁ ဘီလီယံ မြန်မာနိုင်ငံမူလပိုင်ရှင်ထံ ပြန်လည်ရောက်ရှိရေး ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် ဆိုင်ရာ အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့အစည်းများ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မီဒီယာများနှင့် ပြည်သူလူထုများ အတူပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်ပေသည် . . .
မြန်မာလူမျိုးများသည် မည်သည့် လူမျိုးများနှင့်မှ မတူအောင်သည်းခံ ခွင့်လွှတ်တတ်ကြသည်။ သည်းခံခွင့်လွှတ် ခဲ့ကြသည်။ ဘယ်လူမျိုး များနှင့်မတူအောင် မေ့မေ့ပျောက်ပျောက် နေတတ်သကဲ့သို့ ပွဲပြီး မီးသေလည် နေ တတ်ပြန်သည်။ ကောက်ရိုးမီးတွေပါဟု အချင်းချင်း ဝေဖန်မှုတွေလည်း ရှိနေသည်။ မည်သို့ဆိုစေ ကာမူ သည်းခံမှု ရေချိန်အတိုင်းအတာ ကုန်သည့်တစ်နေ့တွင် သေနတ်နှင့် ချိန် ထားသည့်ကြားမှ ဓားနှင့် တက်ခုတ် ၀ံ့သည့် သတ်္တိမျိုး၊ စက်သေနတ်တွေကို မမှုသည့် ကျည်ပြီးရင်ဘတ်မျိုး နယ်ချဲ့စစ်ပွဲများတစ် လျှောက်တွင်၊ အာဏာရှင်များ ဖိနှိပ်သည့် အနိုင်ကျင့် ရက်စက်ပွဲများတွင် ကြုံတွေ့ ခဲ့ရဖူးပြီးဖြစ်သည်။
နောင်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဆက်လက်ဖြေရှင်းရဦးမည့် စာရင်းခေါင်းစဉ် ၅ ခုနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ ကိစ္စသည် ယခုတော့ နှစ်ဟောင်းမှာပဲ အန္တရာယ်ကင်းစွာ ထားရစ်ခဲ့ပြီလား။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကုန်ခါနီး ကာလတစ်လျှောက် ပြည်သူတွေ အထူးစိတ်ဝင်တစား သိလိုမှုဆန္ဒ နှင့်အတူ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အသံ တွေထွက်လာခဲ့သည့် ဖော်ပြပါစာရင်း ခေါင်းစဉ် ၅ ခုနှင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံကိစ္စသည် ယင်း ကာလနောက်ပိုင်း မည်သည့်အသံမျှ မကြားရတော့ချေ။ …
ယင်းအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ပုဂ္ဂလိက မီဒီယာများတွင် ဖော်ပြချက်များကို ပြန်လည် ချိတ်ဆက်ရမည် ဖြစ်သည်။ ဆင်းရဲမွဲတေမှု တရိပ်ရိပ်တက် နေသည့်နှုန်းကို ဟန့်တားနိုင်မှု မပြုနိုင် သေးချိန် အများပြည်သူများ အတွက် စား၊ ၀တ်၊ နေရေးနှင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး တို့အတွက် ကယ်သူကို မျှော်နေရခိုက် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံကို စာရင်းခေါင်းစဉ် ၅ ခုဖြင့် နိုင်ငံတကာ ဘဏ်အသီးသီးတွင် မြန်မာနိုင်ငံက တရားမ၀င် အပ်နှံထားသည်ဆိုသည့် သတင်းဆိုးသည် ကမ္ဘာသိဖြစ်သွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက်နေ့က နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများကို စောင့် BIC (Bank Information Center) မှ အာရှရေးရာ မန်နေဂျာ Mr. Jelson Garcia က မြန်မာနိုင်ငံမှ ပြည်ပ တွင် အပ်နှံထားသော နိုင်ငံခြား ငွေစာရင်း ၅ ခုရှိပြီး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီ ယံရှိသည်ဆိုသည့်သတင်းဖြင့် စနက်တံ ဖြုတ် လိုက်သည်။
တိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုအတွက် တစ်စုံတစ်ရာသော အတိုင်းအတာအထိ ဖြစ်ထွန်းနိုင်သည့် ယင်းငွေ ပမာဏကို လက်ရှိအစိုးရ အနေဖြင့် တိကျစွာ စစ်ဆေးဖော်ထုတ်ပေးရန် ပြည်သူများလို လားကြသည်။ ယင်း ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး အထင်အရှားရှိနေဆဲ သက်သေထွက်ချက်ဟု ယေဘုယျ ယူဆနိုင်သည့် ရလဒ်တစ် ခုကား ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ Mr. Jelson Garcia က အီးမေးလ်ပေးပို့ရာ တွင်လည်း မြန်မာနိုင်ငံက ပြည်ပတွင် ငွေစာရင်း ၅ ခု၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံ အပ်နှံထားသည် ဆိုသောသတင်းမှာ ၎င်းအနေဖြင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မတ်လ နှင့် ဧပြီလအတွင်း ကမ္ဘာ့ဘဏ်၊ အာရှ ဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သော အစည်းအဝေးမှ ရရှိသည့်သတင်း အချက်အလက်ပေါ်မူတည်၍ ရှင်းလင်း ပြောကြားခြင်းဟု ဖော်ပြထားပြီး ၁၁ ဘီလီယံ မရှိကြောင်း၊ အကောင့် ၅ ခုနှင့် ၁၁ ဘီလီယံမှာ မဟုတ် ကြောင်း တစ်လုံး တစ်ပါဒမျှ ငြင်းဆိုသွားခဲ့ခြင်း မရှိသည့်အချက်ပဲ ဖြစ်သည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်အတွင်း The Hindu Times သတင်းစာတွင် ဆွစ်ဘဏ်များက ထုတ်ပြန်သော သတင်းအချက် အလက်နှင့် ကိန်းဂဏန်းများအရ ဆွစ်ဘဏ်များတွင် ၀ှက်ထားသော အိန်္ဒိယအစိုးရ၏ တရားမ၀င် မှောင်ခိုငွေမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံရှိသည်၊ ရုရှားနိုင်ငံက ဘီလီယံ ၇၄၀၊ UK နိုင်ငံက ဘီလီယံ ၃၉၀၊ ယူကရိန်းနိုင်ငံက ဘီလီယံ ၁၀၀ နှင့် တရုတ်နိုင်ငံက ၉၆ ဘီလီယံ အသီးသီး ရှိကြသည်ဟု ဆိုသည်။
တရားမ၀င် မှောင်ခိုငွေပမာဏ အများအပြား ပိုင်ဆိုင်ပြီး ထိပ်တန်းနိုင်ငံ စာရင်းဝင် အဆိုးကျော်ဇော်နေသည့် ကာယကံရှင် မည်သည့်နိုင်ငံမဆိုမှာ ပြည် သူများသည် ယင်းကိစ္စနှင့်ပတ်သက်ပြီး စိတ်ဆင်းရဲ၊ ကိုယ်ဆင်းရဲနှင့် အခက်ကြီး ကြုံတွေ့နေကြရမည်မှာ သေချာလှသည်။ နိုင်ငံနှင့် အများပြည်သူ ပိုင်ဆိုင်သည့် ယင်းငွေ အမြောက်အမြားကို အဂတိလိုက် စားသူများက ယင်းတို့၏ ပုဂ္ဂလိက ငွေကြေးခေါင်းစဉ်များနှင့် တရားမ၀င် အပ်နှံထားကြသည်။ ယင်းသို့ အပ်နှံထားသည့် တရားမ၀င် မှောင်ခိုငွေများသည် အဆိုပါ တိုင်းပြည်များ၏ ပြည်ပ ကြွေးမြီများထက် ၁၃ ဆ များသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာနိုင်ငံက တရားမ၀င် အပ်နှံထားသည့် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီ လီယံဆိုသည်မှာ နိုင်ငံ၏ ပို့ကုန် သဘာဝ ဓာတ်ငွေ့ကို ၄ နှစ်ဆက်တိုက် ပြည်ပသို့ တင်ပို့ရောင်းချရမည့် ငွေပမာဏ (သို့မ ဟုတ်) မြန်မာ့ ကျွန်းသစ်တန်ချိန် ၁၂ သန်းကျော် ပြည်ပတင်ပို့ ရောင်းချရမည့် ငွေကြေးပမာဏဖြစ်နေရာ ပြည်သူများအတွက် မိမိတို့နိုင်ငံ၏ မြေပေါ်မြေအောက် သယံဇာတများ ရောင်းချပြီး ရယူထား သည့် ငွေများ ဟုတ်၊ မဟုတ် ဖော်ထုတ် ရှင်းလင်းရန် ပြည်သူလူထုက လိုလားနေ ဆဲဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရ တာဝန် ရှိသူများက မူလ စိစစ်ဖော်ထုတ် ရမည့် အစား ခုတ်ရာတလွဲ၊ ရှရာတခြား ဖြေ ကြားမှုများ၊ ဆင်သေကို ဆိတ်သားရေနှင့် ဖုံးသည့် စကားတန်ဆာများ၊ ရေငုံနှုတ် ပိတ်နည်းလမ်းများဖြင့် ပြည်သူများ၏ ဆန္ဒကို ဖုံးအုပ်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့ကြသည်ဟု ဝေဖန်ပြောဆိုမှုတွေ ရှိနေသည်။ ပြည်သူ တွေ မကျေနပ်မှုများစွာထဲမှ မကျေနပ်မှု အကြီးကြီးတစ်ခုအဖြစ် သုံးသပ် နေကြသည်။
သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူတွေက မည်သို့မျှ အရေးယူတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုသည့်အခါ စကားလုံး တစ်လုံးတည်းနှင့် ပေါင်းရုံးသုံးသပ်နိုင်မည့် အဆိုတစ်ရပ်ရှိပါသည်။ အကြောင်းပြချက်နှင့် အမှန်တရား ကို သက်သေပြနိုင်သည့် သီအိုရီလည်း ဖြစ်တန်ရာသည်။ Silence Implies Consent ““ဆိတ်ဆိတ်နေ ၀န်ခံခြင်း””ဆိုသည့် အချက်ပဲဖြစ်သည်။ သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများက ပေယျာလကန် ပြုခဲ့ လေသလား၊ မတော်တမဲ့ မြင်လား၊ မသိကျိုးကျွန်လား၊ ယင်းကြောင့်ပင် လူသိရှင်ကြား၊ အုတ်အော်သောင်းတင်း ဖြစ်စေ သည့် မီဒီယာများ၏ ထုတ်ဖော်ပြောဆို ချက်များကြောင့်လည်း သိသာ မြင်သာ သည့် နှုတ်ဆိတ်နေခြင်း (noticeable Silence) သည် တိုင်းပြည်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းစေပြီး ယင်းတို့သည်လည်း ယင်းတို့၏ ပြစ်မှုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံရှာကြသည်ဟု သတင်းမီဒီယာတွေက သုံးသပ်ကြသည်။
မည်သည့် သတင်းစာကမျှ ၁၁ ဘီလီယံ မှာ အစိုးရအပ်ထားပါသည်လို့ ရေးသား ခဲ့ခြင်းမရှိ၊ မည်သူအပ်သည် ဖြစ်စေ စိစစ်ပေးရမည်မှာ အစိုးရ၏ တာဝန်သာဖြစ် သည်။ ပြည်သူတွေ၏ ဆန္ဒဖြစ်သည့် နိုင်ငံ တကာဘဏ် များတွင် မှောင်ခိုထား ရှိသည့် ဘဏ်စာရင်းများကို ဖော်ထုတ် ရှင်းလင်းရန် ရှိ၊ မရှိနှင့်ပတ်သက်ပြီး စက် တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေပြည်တော်မှာ ကျင်းပသည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် မီဒီယာများ၏ မေးမြန်းချက် အပေါ် နိုင်ငံတော်သမ္မတ၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ အပါ အ၀င် အစိုးရတာဝန်ရှိသူ တစ်ဖွဲ့လုံး မည်သူမျှ ပြန်လည် ဖြေကြားခြင်း မပြုဘဲ ရေငုံနုတ်ပိတ်ပြီး မေးခွန်းများကို အဆုံးသတ် စေခဲ့သည်။ ယင်းအခြင်းအရာများသည် Silence imprlies consent, deafening Silence နှင့် noticeable silence စသည် တို့နှင့် တစ်ထပ်တည်း ကျနေပေသည်။
အိနိ်္ဒယနိုင်ငံသည် ဆွစ်ဘဏ်များတွင် ယခုကဲ့သို့ မှောင်ခိုအပ်နှံထားသည့် ငွေစာရင်းတွင် ငွေကြေးပမာဏ ၁ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ရှိသည်ဖြစ်ရာ ယင်းကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖြေရှင်းနေရသည့် အတွက် အိနိ်္ဒယနိုင်ငံ၏ ဖြစ်စဉ်နှင့် သာဓကများကို လေ့လာကြည့်ဖို့လိုပေသည်။
၂၀၀၉ခုနှစ် Lik Sabha ၀င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်စဉ်က BJP ပါတီခေါင်းဆောင် L.K.Adiani က သူ ရွေးကောက်ပွဲ မဲအနိုင်ရလျှင် ဆွစ်ဘဏ်တွေမှာ တရားမ၀င်အပ်နှံထားသည့် အိနိ်္ဒယ ပြည်သူတွေပိုင် ခန့်မှန်းခြေငွေ ကြေး ၁ ဒသမ ၄ ထရီလီယံ ဒေါ်လာကို ရအောင် ပြန်ယူပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း မဲဆွယ် ကတိက၀တ်ပြုခဲ့သည်။ Sonia ရွေးကောက်ပွဲများ၏ ကွန်ဂရက်ပါတီက ဤမျှများပြားသည့် ငွေကြေးပမာဏ မရှိကြောင်း ငြင်းခဲ့သည်။ သို့ရာ တွင် အိနိ်္ဒယပိုင် ငွေကြေးများ ပြန်လည်ရရှိရေးပြည်သူတွေ၏ တောင်းဆိုမှုများ ဟိုကွက်ကျား၊ ဒီကွက် ကျားကနေ စုစည်းလာပြီး အရှိန်အဟုန် Gathering momentum ဖြစ်လာသည့်အခါ manmohan Singh နှင့် Somi Gundhi တို့က နာမည်ပျက် သိက္ခာကျသွားသည့် သူတို့၏ နာမည်၊ သူတို့၏ပါတီနှင့်သူတို့ အစိုးရအဖွဲ့၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ဆယ်ယူသည့်အနေဖြင့် ပြည်ပတွင်ဝှက်ထားသည့် တရားမ၀င်ငွေများကို ပြန်ယူပေးပါမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။
ယင်းပြဿနာတွင် အခရာကျသည့် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ ရှိသည်။ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ သမာဓိငွေကြေးအဖွဲ့ (Globak Financial Integrity –GFI ဖြစ်သည်။ ယင်းအဖွဲ့သည် တရားမ၀င်ငွေကြေး အဖွဲ့အစည်းများကို မထောက်ခံဘဲ သမာသမတ်ကျကျ ဆောင်ရွက်ပေးနေသည့် အမြတ်အစွန်းမယူသည့် အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ မြန်မာ နိုင်ငံ ၁၁ ဘီလီယံ ဥစ္စာရင်း မှန်ပြန်လည် ရရှိရေး GFI အကူအညီလိုအပ်ကောင်း လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။
ထည့်သွင်း စဉ်းစားရမည့် နောက်တစ် ချက်ရှိပါသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါ ရီလ ခပ်စောစောပိုင်းက Lichtenstein နိုင်ငံဘဏ်မှာ ပြည်ပနိုင်ငံအသီးသီးမှ လူများ တရားမ၀င် ငွေကြေးအပ်နှံထားသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး ဂျာမဏီနိုင်ငံ အာဏာပိုင်များက သတင်းကောက်ယူစု ဆောင်းလျက်ရှိသည့် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ များအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံမှာ ယခုကဲ့သို့ တရားမ၀င်ငွေကြေးအပ်နှံသူများ စာရင်း ကို စိတ်ဝင်စားလို့ သိချင်တယ် ဆိုလျှင် အဲဒီဘဏ်တွင် စာရင်းပေါက်နေသူများ၏ အမည်စာရင်းကို အသိပေးမည်ဖြစ် ကြောင်း ဂျာမဏီ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးက ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ သတင်းမီဒီယာများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရဆိုလျှင် Lichtenstein ဘဏ် တွင် တရားမ၀င် စာရင်းပေါက်နေသည့် အိနိ်္ဒယလူမျိုး ၂၅၀ခန့် ရှိနေသည်ဟု ဆိုသည်။ အစဉ်အလာအရဆိုလျှင် Lichtenstein ဘဏ်သည် လျှို့ဝှက်ငွေကြေး စာရင်းဖွင့်ထားသည့် မည်သည့် လူပုဂ်္ဂိုလ် ၏ စာရင်းကိုမှ ဖွင့်ပြောလေ့ မရှိပါဘူး။ Tax treaty ဟုခေါ်ပါသည်။
ဂျာမဏီ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး၏ ကမ်းလှမ်းမှုနှင့် အရပ်ရပ်၏ ဖိအားများနှင့် အတူ ဘဏ်စာရင်းဖွင့်ထားသည့် လျှို့ဝှက် အမည်များ တောင်းဆိုမှု ရေချိန်တက်လာတော့သည်။ Tax treaty သဘောတူညီမှု အောက်တွင် သတင်းအချက် အလက်များကို လျှို့ဝှက်ထားရသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ရရှိသောသတင်းများကိုမူ အများ ပြည်သူတို့ ထုတ်ဖော်ပြောပြနိုင်သည်။ သို့ရာတွင် အိနိ်္ဒယအစိုးရအနေဖြင့် ပြည်ပနိုင်ငံဘဏ် အသီးသီးတွင် ငွေစာရင်းဖွင့် ထားသည့် အိနိ်္ဒယလူမျိုးများ၏ အမည် စာရင်းကို ဖော်ထုတ်ဆိုခြင်းမရှိချေ။ အဲဒီ ကိစ္စအတွက် မီဒီယာများ ကောက်ချက်ကတော့ ome big names in the ruling circles are reportedly involved ပဲဖြစ် သည်။ ယင်းအချက်ကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည့် နောက်ထပ် သာဓကတစ်ခုရှိပါ သေးသည်။ အိနိ်္ဒယနိုင်ငံ Pune ဒေသမှ မြင်းခြံပိုင်ရှင် မြင်းမွေးသူ Hasan Ali ဆို သူ၏ အမှုပဲဖြစ်သည်။ Hasan Ali ဟာ ဆွစ်ဘဏ်မှာ တရားမ၀င် မှောင်ခိုငွေ ရူပီး ၁ဒသမ၅ Lakh-Crore (ကုဋေ-၁ဒသမ၅ သိန်း) ကျော် ရှိကြောင်း စစ်ဆေး တွေ့ရှိရသည့် အတွက် အိနိ်္ဒယအစိုးရ အမြတ်ခွန် ဌာနက သူ့ကို ရူပီး ၇၁၈၄၈ ခမသမန အမြတ် ခွန်စည်း ကြပ်ခဲ့သည်။ ယင်းအမှု ယခုအခါ ပိတ်သွားပြီဖြစ်သည်။ ဆွစ်ဇာလန်အစိုးရ ထံသို့ ပေးပို့သော မေတ္တာရပ်ခံ တောင်း ဆိုချက်တွေကြောင့် ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ crore ၏ အမှုတွင်လက်ရှိ အာဏာရ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှ အထင်ကရ ပုဂ်္ဂိုလ်အချို့ ပါဝင် ပတ်သက်နေသော ကြောင့်ဖြစ်သည်ဟုဆိုသည်။ ယင်းအချက်အလက် တွေကို ကောက်ချက် ဆွဲသည့်အခါ အစိုးရက အဂတိလိုက်စားမှုတွင် တိုက်ရိုက်ပတ် သက်နေမှုများရှိနေ၍ပင်ဖြစ်သည်။ ယင်းရဲ့ အကျိုးဆက်ကတော့ Hasan မိသားစု၏ ဆွစ်ဘဏ်များတွင် တရားမ၀င် လျှို့ဝှက်အပ်နှံထားသည့် ငွေကြေးအပါ အ၀င် အိနိ်္ဒယနိုင်ငံမှ တရားမ၀င် ဆုတ်ခွာသွားသည့် ငွေကြေးပမာဏ အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၄၆၂ ဘီလီယံအတွက် ယနေ့အထိ လွတ်လပ်သော စုံစမ်းမှုများ မပြုလုပ်နိုင်သေးပေ။
လက်ရှိအစိုးရ အနေဖြင့် မည်သို့ပင် ဖုံးအုပ်ကာကွယ်သည်ဖြစ်စေ၊ ဖော်ထုတ် စိစစ်ပေးရန်အတွက် ဆန္ဒ မရှိသည်ဖြစ်စေ အများပြည်သူကမူ ယနေ့အထိ မမေ့မ လျော့မပေါ့ဖို့လိုသည်။ စည်းလုံးညီညွတ်စွာ ပူးပေါင်း ရပ်တည်ကြဖို့လိုသည်။ အရပ် ဘက်အဖွဲ့အစည်းများ၊ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင်စာ နယ်ဇင်းမီဒီယာများသည် ပြည်သူ့ ဘက်က ရပ်တည်ကြဖို့လိုသည်။ ၁၁ ဘီလီယံသည် ပြည်သူတွေ ဆင်းရဲမွဲတေမှုမှ ကျွတ်လွတ်ရေးအတွက် တစ်စုံ တစ်ရာဖြစ်သည်။
ပြည်ပဘဏ် တစ်ခုခုတွင် တရားမ၀င် ၀ှက်ထားသော အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၁ ဘီလီယံသည် အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာ အဂတိလိုက်စားမှု (Governmental Corruption) ဖြစ်သည်။ အစိုးရ၀န်ကြီးဌာန အသီးသီးမှ ၀န်ထမ်း အဆင့် ဆင့်ကြီး၊ ငယ်မရွေးတို့သည် တိုင်းပြည်၏ သဘာဝအရင်းအမြစ်များမှ ခိုးနည်းမျိုးစုံဖြင့် ခိုးယူချမ်းသာ ကြွယ်ဝ လျက်ရှိကြသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ဝင် အချို့သည် တိုင်းပြည်အတွက် ပြည်ပနိုင်ငံ အချို့မှ ကူညီ ထောက်ပံ့ သော နိုင်ငံခြား အကူအညီများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး ချမ်းသာကြွယ်ဝလျက်ရှိသည်။
အကျင့်ပျက် အဂတိလိုက်စားသည့် အာဏာရှင်ကြောင့် ပြည်သူလူထုတွေ နှစ်ပရိစ္ဆေဒကြာရှည်စွာ အထွေထွေ အကျပ် အတည်းခက်ခဲ ချွတ်ခြုံကျမှုမျိုးစုံ ခံစားနေရသည်။ ပြည်သူလူထု၏ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွင် the rule of Law သည်လည်း တစ်စစီဖြစ်သွားသည်။ အဂတိလိုက်စားသည့် အာဏာရှင်သည် ဓနဥစ္စာ ပိုမိုကြွယ်ဝပြီး အာဏာ တည်မြဲရေးကိုသာ အာရုံစိုက်လေ့ရှိပြီး တိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည့် စီးပွားရေးနှင့် လူမှုရေး ပြဿနာများကို ဥပေက္ခာပြု လျစ်လျူရှုလေ့ရှိသည်။
ဒီနေရာတွင် နှိုင်းယှဉ်တင်ပြစရာ သာဓကအချို့ရှိသည်။ အစိုးရအဖွဲ့ (သို့ မဟုတ်) အစိုးရအဖွဲ့ ခေါင်းဆောင် ကိုယ်ပိုင် ကမ္ဘာသိ အဂတိလိုက်စားမှုများ အနက် အထင်ရှားဆုံးအမှုကား ၁၉၆၉ – ၁၉၉ ခုနှစ်အထိ ၃၂ နှစ်တိုင် အာဖရိက တိုက်ကွန်ဂိုနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် Marshal Mobutu Sese Seko ဖြစ်သည်။ တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေကို ခိုးသည့်ဝှက်သည့် မတရားယူသည့် Kleptocracy သမား ဖြစ်သည်။ ပြည်သူလူထုကို နှိပ်စက် ညှဉ်းပန်းသည်။ နောက်ဂန္ထ၀င်တစ်ဦးကတော့ ၁၉၉၃-၁၉၉၈ခုနှစ်အထိ အာဖရိကတိုက် နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် Sani Abacha ဖြစ်သည်။ သူသည် တိုင်းပြည်မှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံ ခိုးယူသူအဖြစ် နိုင်ငံတကာက လက်ခံထားသည်။
ကမ္ဘာ့ဘဏ် ဖော်ပြချက်များအရ နိုင်ဂျီးရီးယား နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များသည် ၁၉၆၀-၁၉၉၉ ခုနှစ်အတွင်း တိုင်းပြည် ဘဏ္ဍာငွေမှ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဘီလီယံ ၄၀၀ကျော် ခိုးယူခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ သိပ်မကြာ လှခင် အချိန်တွင်းကပင် ကမ္ဘာကျော် Forbes မဂ္ဂဇင်းကြီးက ၁၉၅၉ခုနှစ်မှ ယနေ့အချိန်အထိ ကျူးဘားနိုင်ငံကို တစ်ဦးတည်း လက်ဝါးကြီးအုပ် အုပ်ချုပ်ခဲ့သည့် အာဏာရှင် Fidel Castro သည် တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာအသီးသီးမှ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၉၀၀ ခိုးယူခဲ့သည်ဟု ဖော် ပြသည်။ သူ၏ နိုင်ငံရေးပြိုင်ဘက်များ၏ အဆိုအရ Castro သည် အထက်ဖော်ပြပါ ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို တရားမ၀င် လက်နက်ရောင်းချရသည့်ငွေများ၊ တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းချရာမှ ရရှိသည့်ငွေများ၊ နိုင်ငံတကာ ချေးငွေများမှ ရယူခဲ့ခြင်းဖြစ်သည် ဟုဆိုသည်။ ယင်း ပမာဏတွင် သူနှင့်အတူ အာဏာရှင် စနစ်သက်ဆိုးရှည်ရေး ကျားကန်ပေးကြ သည့် နောက်လိုက် နောက်ပါ လက်ပါးစေ Cronies များ၏ တရားမ၀င်ကြွယ်ဝချမ်း သာမှုများ မပါဝင်သေးဟု ဆိုကြသည်။
The Daily Eleven သတင်းစာက ၁၁ ဘီလီယံသတင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ စက်တင်ဘာ ၁၂ရက်နေ့က မြန်မာနိုင်ငံ၏ နာမည်ကျော်လုပ်ငန်းရှင် နာမည်ကြီးကုမ္ပဏီမျာ က တာဝန်ရှိသူများ ရရာလေယာဉ် လက်မှတ် ဖြတ်ကာ စင်ကာပူဘဏ်များသို့ တက်သုတ်ရိုက်ထွက်သွားခဲ့သည်။ ယင်း အချက်ကိုကြည့်လျှင် မြန်မာနိုင်ငံ သားများ နိုင်ငံတကာ ဘဏ်များတွင် နိုင်ငံခြားငွေ မည်မျှအပ်နှံထားနိုင်သည်ကို ခန့်မှန်းနိုင်ကြ မည်ဖြစ်သည်တဲ့။ အိနိ်္ဒယနိုင်ငံတွင် ဖြစ်ပျက် နေသည့် အခြေအနေနှင့်ချိန်ထိုး ကြည့်လျှင် ထင်ရှားခိုင်မာသည့် Links များရရှိ နိုင်မည်ဟု ယူဆသည်။ အိနိ်္ဒယလူမျိုးများ ဆွဏ်ဘဏ်များရှိရာ ဆွစ်ဇာလန် နိုင်ငံသို့ နှစ်စဉ်အလည် အပတ် သွား ကြသည့် လူဦးရေ ၂၅၀၀၀ရှိသည့်အနက် ၃၀၀ ခန့်သည် ဆွစ်ဘဏ်များ၏ Clientle များဖြစ်ကြသည်ဟု ဆိုသည်။
မြန်မာပြည်သူတွေ၏ ဥစ္စာရင်းပိုင် ၁၁ဘီလီယံ မြန်မာနိုင်ငံမူလပိုင်ရှင်ထံ ပြန် လည်ရောက်ရှိရေး ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မီဒီယာ များနှင့် ပြည်သူ လူထုများ အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်ပေသည်။
Wirte: Sae Hark Maine
မြန်မာပြည်သူတွေ၏ ဥစ္စာရင်းပိုင် ၁၁ဘီလီယံ မြန်မာနိုင်ငံမူလပိုင်ရှင်ထံ ပြန် လည်ရောက်ရှိရေး ပြည်တွင်း အရပ်ဘက် ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်ပအဖွဲ့ အစည်းများ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ မီဒီယာ များနှင့် ပြည်သူ လူထုများ အတူ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ရန် အထူးလိုအပ်ပေသည်။ - See more at: http://www.dawnmanhon.com/2014/02/blog-post_3718.html#sthash.A42LRh4a.dpuf